Akka mootota wallaaltootaa Nabii Suleymaan (Aleyh salaam) mootummaa, aangoo fi dandeetti isaatiin hin goowwomne. Garuu inni wantoonni kunniin Gooftaa isaa irraa qormaata akka ta’an ni bare. Qananii argate kana irratti “galata ni galcha moo hin galchu” jechuun sodaate. Ergasii Rabbiin galata namaatti kan itti hin fayyadamne ta’u ifa godhe. Faaydan galata galchuu namuma galata galche irratti deebi’a. “Namni [Rabbiin] galateefate, kan inni galateefatu lubbuma ofiitiif. Namni kafares [lubbuma ofii miidha]. Dhugumatti Gooftaan kiyya Dureessa Arjaadha.” Rabbiin hojii namni hojjatu fi galata inni galchu irraa dureessa. “Arjaadha” keeyri (gaarii) baay’ee kan qabuu fi keeyri kanaan nama galata galchu fi hin galchine haguuga. Garuu shukriin (galata galchuun) qananiin amma jiruu akka itti fufuu fi qananii bade akka argataniif sababa ta’a. Qananii irratti galata galchuu dhiisun (kafaruun) immoo qananiin suni akka badu taasisa. Qur’aana keessatti: “Yeroo Gooftaan keessan [akkana jechuun] labse [yaadadhu], “Yoo galateefattan [qananii Kiyya irraa] isiniifin dabala. Yoo kafartan dhugumatti adabbiin Kiyya akkaan hamaadha.” Suuratu Ibraahim 14:7